Igwe na-ehicha ala
Nkume Mmezi Chemical Crystallizer
Uzo esi aga na họtelu si multifunctional floor scrubber
Lọ nkwari akụ ahụ nke na-arụ ọrụ nke ọma nwere mpụta mara mma yana ọmalịcha mara mma yana etu esi arụ ya. Igwe ikuku-ikuku, nhazi nke okpukpu abụọ, ọrụ dị nchebe ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, akụkụ nnyefe na-anabata igwe anaghị agba nchara atọ, akara ọma, ...
Ndị obodo anyị haziri ịgba ọgwụ mgbochi okpueze ọhụrụ
Na 6: 30pm na Eprel 14th, esonyere m na ọgwụ mgbochi okpueze ọhụrụ nke gọọmentị nyere. E nyere usoro ọgwụgwọ atọ maka oge dị iche iche. N'ihi na ahụ onye ọ bụla dị iche, mmeghachi omume mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dịkwa iche. Mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, mmeghachi omume m na-ehi ụra, m bụ anyị ...
Companylọ ọrụ na-ehicha na nhicha kwa ụbọchị na-ekwu maka otu uche nke ihicha na ndozi
A na-ekewa kapeeti n'ime ụzọ atọ: ajị dị ọcha, ezigbo silk, na eriri kemịkal. E nwere ọtụtụ ụzọ mmezi dị iche iche maka kapet dị iche iche. Họrọ onye na-ehicha ihe ekwesiri dịka ụdị ihe nhicha akwa a: Ihe nchacha ụfụfụ: Jiri igbe ọkpọ ụfụfụ ọkachamara ...
Nke azụmahịa agụụ Cleaner dị mma iji? Kedu ka m ga - esi họrọ?
Ugbu a ọtụtụ mmadụ na-enwe mmasị ịga ahịa, yabụ ndị njem na-aga ahịa na ụfọdụ ụlọ ahịa na-ebu nnukwu ibu, ebe mpaghara ịzụ ahịa dịkwa nnukwu, yabụ oke nhicha dịkwa oke. Ọ bụrụ na ị dabere na ike mmadụ maka ihicha, oke ọrụ dị nnukwu, yabụ i ...
Yoù maara n’ezie uru nke ihe nhicha ọkụ? Na mgbakwunye na agụụ, e nwere ụzọ anwansi ise!
N'oge a, site na mmepe nke teknụzụ na oge, a na-emeziwanye ndụ mmadụ nke ukwuu. Ọ dịzị ka emefu ọtụtụ ihe ezinụlọ ji eri nri dịka ọ dị iri afọ ole na ole gara aga. Engel ọnụọgụ bụ ihe nzuzu elu. Ka m chọpụtara na adv ...
Ndị na-ehicha ihe kwesịrị ịghọta nhicha ụlọ nkwari akụ na ndozi ya
A na-ekpuchi ụlọ oriri na ọ publicụ andụ na ọtụtụ ebe ọha na eze dị ka ime ụlọ na paseeji na kapeeti. E nwere ụdị kapeji atọ dị iche iche a na-ejikarị eme ihe, ya bụ, kapeeti na-eme ka kemịkalụ, kapeeti ajị anụ na nke a na-agwakọta agwakọta.
Kedu ka ụlọ oriri na ọ hotelsụ highụ dị elu si ehicha kapeeti? Akụzi gị nzọụkwụ na usọ nke ọkachamara ihicha ihicha
N'oge a, ka ọ na-aga ngwa ngwa n'oge a, a na-ejikarị carpị eme ihe ugbu a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ ọ bụla. Kapeeti nwere ike ọ bụghị naanị belata uzuzu akpụkpọ ụkwụ batara n'ime ụlọ ahụ. Nhicha nke kapeeti enweghị ike ileghara anya. N'ozuzu, ụlọ nkwari akụ dị elu ma ọ bụ ụlọ ndị ọbịa na-eleba anya na nhicha fab ...
Principlekpụrụ ọrụ nke ihe nhicha ụlọ nkwari akụ Gịnị bụ uru na njirimara nke nkwari akụ nke nkwari akụ
Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ na ụkpụrụ ndụ dị elu na nke dị elu nke ndị mmadụ, ụdị ndụ niile anaghịzi atụkwasị obi na ọrụ mmadụ iji mee ka ime dị ọcha ma dị ọcha. Ọdịdị nke ndị na-ehicha agụụ na-enye ohere dị iche iche maka ọrụ ụlọ. Hotels nwekwara A rara ...
Ihe ndị dị mkpa maka ngwa nhicha ụlọ nkwari akụ
Mkpa nke nhicha akụrụngwa nhọrọ: Nke mbụ, n'ihi na ọtụtụ ihe nhicha nwere nnukwu ego na ogologo ndụ ọrụ; nke abụọ, nhọrọ nke nhicha akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka mmetụta nhicha na ike mmezi. Na-ewere ụlọ nkwari akụ dị ka ihe atụ, ụlọ nkwari akụ ọ bụla kwesịrị ...
Kedu akụrụngwa nhicha ụlọ nkwari akụ ahụ chọrọ? Esi họrọ?
Maka ụlọ nkwari akụ, njikwa ihe nhicha bụ akụkụ dị mkpa nke njikwa ụlọ ndị ọbịa. Ọ bụghị naanị metụtara uru akụ na ụba nke ụlọ ndị ọbịa, kamakwa ọ bụ ọnọdụ bụ isi iji hụ na ọrụ nlekọta ụlọ na-aga nke ọma. Kedu ụdị ngwa nhicha dị na họtel ...
SWOT nyocha nke ndi isi egwuregwu na ahia nhicha ulo oru dika Delfinvacuums, RUWAC INDUSTRIESAUGER GMBH, RGS ihe nhichapu ahihia, wdg.
Site na iji ulo oru agụụ Cleaner ahịa nnyocha akụkọ, òtù nwere ike inweta ihe ọmụma dị mkpa banyere ndị asọmpi, mgbanwe akụ na ụba, omume igwe mmadụ, ahịa ugbu a na ọnọdụ, na ndị ahịa na-emefu àgwà. Nkwupụta ahịa ahịa ụwa a na-atụpụta azịza nyocha nke ụwa ọ bụla maka nke ọ bụla ...
Nke a bụ onye mmeri ọ bụla nke 2021 "Cleanlọ dị ọcha"
Ndị editọ anyị nwalere ọtụtụ narị sprays, wipes, cleaners and tools. Ngwaahịa anyị kwesịrị inwe: ngwaahịa ndị dị mfe iji ma dị ike. Ego ego maka nchekwa na ọbụbụenyi nke ụwa. Na “Better Homes & Gardens” nke 1964 gụrụ, sị: “Ọ bụghị nyocha niile nwere r ...
Oké ifufe mmiri na Mongolia akpatawo ọnwụ 6 na 80 na-efu efu
Darima Basil / CCTV News N'ụtụtụ ụtụtụ Machị 15, obodo oge, Mongolia State General Administration nke Ọnọdụ Mberede kwupụtara na site na mgbede nke 13 ruo 9 n'ụtụtụ na 15th, ngụkọta nke ndị ọzụzụ atụrụ 548 sitere na mpaghara 9 na-efu na sandstorm gafee countr ...
Na brek dara ọzọ! Tesla na-adaba na nchekwa, mgbe irere ahịa kwa! Kacha ọhụrụ: Ala na-amị amị!
Na ngwụsị izu a, brekị Tesla dara ọzọ. Akụkọ dị ka nke a: onye nwe Tesla, na-enweghị ike ịbanye na breeki ahụ, banye n'ime isi ụgbọ ala ahụ na mbụ, wee jụọ ndị ahịa ahịa ahịa nke Tesla maka enyemaka. Agbanyeghị, ndị ọrụ Tesla ekwetaghị ya wee gbalịa ...
Ọkụ gbara n'ụlọ ụlọ ama ama dị na Shijiazhuang
Ọkụ ahụ gbara gburugburu 11: 20 n'ụtụtụ a na ihe mkpuchi nke mgbidi mpụga nke holọ Zhongxin, nke dị n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ nke nrutu nke Jianshe Dajie na Fanxi Road na Shijiazhuang City, Province Hebei. na ngalaba ndi ozo ...
Ahịa ihe onwunwe na-ebili na China
Ọrịa ahụ emeela ka nrụpụta zuru ụwa ọnụ na-esighi ike na nnweta ngwa ngwa. Ọnụọgụ agbakwunyere ọnụ ahịa nke ọla kọpa dị elu nke China, nke na-abụghị nke na-eme ka mmiri, na-egwupụta coal na ịsa ahụ ka dị ala karịa ngụkọta ụlọ ọrụ mmepụta ihe agbakwunye. Ihe mmepụta ihe na-emepụta ihe eji eme ihe na nke mbụ ...
Ihe 5 ịchọrọ mgbe ị na-ahọrọ nhicha kapeeti
N’oge gara aga, kapeeti champoo abụghị ọkacha mmasị onye ọ bụla. Otú ọ dị, onye ọ bụla nwere kapeeti ma ọ bụ ọbụna kape a hà ka ọnụ ụlọ ga-ekweta na a ghaghị idozi okwu a na-adịghị mma na mgbe ụfọdụ na-enweghị enyemaka ruo mgbe oge gafere. Tinyere eziokwu ahụ na igwe azụmaahịa azụmaahịa ...
Ọnọdụ dị ugbu a na echiche nke ahịa okwute marble zuru ụwa ọnụ na 2020 - Husqvarna, Indutrade (Scanmaskin), HTC Group, Xingyi Polishing, Xtreme Polishing System
MarketsandResearch.biz weputara akuko nyocha ohuru banyere ahia marulu ala uwa n’aho 2020, nke gunyere ndi n’emeputa ihe, mpaghara, udiri na ngwa, na amuma maka 2025. Nke a ga abu nchoputa nke ahia uwa na ntule zuru oke na nyocha di omimi. U ...
Global Marble Ft egweri Machine Market 2020 Ọnọdụ na Outlook - Husqvarna, Indutrade (Scanmaskin), HTC Group, Xingyi Polishing, Xtreme Polishing Systems
MarketsandResearch.biz ekpughela nyocha ọhụụ ọhụụ na Global Marble Floor Grinding Machine Market 2020 site n'aka ndị nrụpụta, mpaghara, Typedị na Ngwa, amụma na 2025 nke a pụtara iji jee ozi dị ka akwụkwọ enyemaka iji nyochaa ahịa ụwa ọnụ yana nyocha zuru oke yana. ..
Lụso COVID-19 ọgụ
Na Jenụwarị 2021, COVID-19 gbasara na Shijiazhuang City, Province Hebei, China. Ọtụtụ ndị butere ọrịa ahụ. Kemgbe Jenụwarị 6, Shijiazhuang emechibidoro kpamkpam maka igbochi ọrịa na-efe efe n'ụlọ. Ndi nile bi n’ime ya nwere ule nucleic acid kwa ubochi ato, ma ndi mmadu ndi si na mpaghara ndi ozo ...
Igodo nke iji ihe eji eme ihe ga - eme ka ahịa marble ala na - eto ngwa ngwa
Companylọ ọrụ nyocha ahịa kachasị ngwa ngwa UpMarketResearch ewepụtala akụkọ banyere ahịa marble n'ala grinder. Nkwupụta ahịa ahụ na-enye ohere ahịa zuru ezu, gụnyere ntinye na ọchịchọ n'ọdịnihu, na-agbanwe usoro ahịa, ohere uto dị elu, yana nyocha miri emi nke ahịa n'ọdịnihu ...
Dika onu ogugu ndi US nwuru 500K, Dr. Anthony Fauci kwuru na ndi America nwere ike yi nkpuchi na 2022: Kacha ọhụrụ COVID-19 mmelite
Ihe karịrị 90,000 ndị America nwere ike ịnwụ site na ihe metụtara COVID-19 site na June 1, otu ụlọ ọrụ amụma amụma na-ekwu. Ntughari a na-abịa ka US na-atụ anya ka ọnwụ karịrị 500,000 n'ime ụbọchị abụọ na-esote. Mgbe ọrịa na-efe efe ga-akwụsị ga-abụ ihe omimi. Dr. Anthony Fauci na-ekwu na ọ bụ & ...
Ihe 5 ị ga - achọ mgbe ị na - ahọ nhicha kapeeti N’oge gara aga, kapetị champoo abụghị ọkacha mmasị onye ọ bụla. Otú ọ dị, onye ọ bụla nwere kapeeti ma ọ bụ ọbụna kape a hà ka ọnụ ụlọ ga-ekweta na a ga-emezigharị ihe a na-adịghị mma na mgbe ụfọdụ na-enweghị enyemaka ...
Etu esi edobe ulo aka nke ulo ahia?
Granite na-edozi ahụ bụ ụdị okwute marble na ntụ ntụ dịka isi ihe eji arụ ọrụ. Enwere ike iji mosaics, shells, iko na ihe ndị ọzọ chọọ ya mma. Ọ na-eji mmiri resin dị ka onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-akpali agụụ, na-eme ka ikuku sie ike, wee gwọọ ụlọ. Sy ...
Nkume na-elekọta nchekwa nchekwa ihe!
Ihe ọghọm nke ihe owuwu emeela ọtụtụ ugboro n'afọ ndị na - adịbeghị anya, na - ebute oke mmerụ ahụ nye ndị ọrụ ihe owuwu. Ọ dịghị ụlọ ọrụ dị iche. Achọrọ ihe omuma ihe eji eme ihe nchebe iji hụ na arụ ọrụ adịghị mma. 1. Eji ọkụ eletrik eme ihe nke ọma 1. Oge ọ bụla ị banyere n’ebe a na-ewu ihe ịwube ...
Nkume Nlekọta skills Ọrụ nkà na nlezianya maka ọgwụgwọ kristal!
1: A ga-asacha uzuzu, aja, na unyi n’elu okwute tupu e wuo ya. 2: Jiri akwukwo nkpuchi, ihe nkiri plastik na ihe ndi ozo iji mechie arịlịka ígwè, arịa ụlọ na ihe ịchọ mma na arịa ndị ọzọ. 3: Ugbu a, igwe ihu ihu kristal eji emezi nkume bụkarị cen ...
Ihe kpatara ya, mgbochi na ọgwụgwọ mmiri mmiri mmiri
A na-akpọ "ntụpọ mmiri" "kansa" na ụlọ ọrụ na-elekọta nkume. Ihe kpatara ya bụ na ozugbo nkume nwere ntụpọ mmiri, ọ na-esi ike ịgwọ. N’ọnọdụ ndị tara akpụ, a pụrụ ọbụna ịma ya ikpe ọnwụ. Mmiri mmiri na-apụta na granite (nke a na-akpọkarị "granite"). N'ihi ...
Iji meziwanye nlekọta nlekọta nkume, ndị nwe ya, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ihe onwunwe na ụlọ ọrụ nhicha ga-agarịrị ụzọ abụọ!
Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị okwute chọọ mma n'ọtụtụ azụmaahịa na ebe ọha na eze dịka ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ, ụlọ ọrụ ọfịs, ebe ịzụ ahịa, ọdụ ụgbọ elu, na ọdụ ụgbọ oloko dị elu, ọkachasị maka ọchọmma dị elu. Nkume okike bu ihe mbu. Ebe ọ bụ na nkume okike dị elu va ...
Okwu chọrọ nlebara anya na nhicha kapeeti oyi
Oge oyi na-abịa n’oge adịghị anya, nke pụtara na ọtụtụ n’ime anyị ga-ekpo ọkụ n’ime ụlọ. Iji mee ka ụlọ gị dị ọcha ma dị mma, oge eruola itinye uwe aka ma mezue ụfọdụ ọrụ. Site na ájá na kapeeti ruo na ákwà mgbochi dị omimi, usoro nhicha oyi ga-enyere gị aka ...
Otu esi ahazi mmezi iji mee ka ala okwute gị rụọ ọrụ nke ọma ma dị ka nke ọhụrụ.
Okwute ahụ siri ike ma sie ike, na-agbakwunye ihe ngosi pụrụ iche maka oghere azụmahịa. Iji mee ka ha dị mma nke ọma ma mee ka ha dị ka nke ọhụụ, ọ dị mkpa iji mejuputa atụmatụ mmezi dị irè. Site na nghọta nkume iji nweta usoro polishing dị ogologo oge, ...
Ọrịa oria COVID-19 emeela ka ndị ụlọ ọrụ nhicha na ọha na eze mara mkpa ngwa ngwa banyere uru na mkpa ọ dị igbochi mgbasa nke ụmụ nje na-efe efe.
Ọrịa oria COVID-19 emeela ka ndị ụlọ ọrụ nhicha na ọha na eze mara mkpa ngwa ngwa banyere uru na mkpa ọ dị igbochi mgbasa nke ụmụ nje na-efe efe. Griffin kwuru, sị: “N’oge gara aga, anyị na-achọ ịsị na nhicha bụ maka ahụike, mana anyị enweghị ike igosipụta ya ....